Ndụmọdụ 10 maka SEO Ndegharị na Ọnọdụ | Martech Zone
N’izu gara aga, anyị zutere ihe dị ka ndị edemede 30 na otu n’ime ndị ahịa anyị ma kwurịta otú ndị na-ede akwụkwọ ha nwere ike isi jiri ngwa ọrụ ọchụchọ dị mma mgbe ha na-ede edemede ha. Nkwado anyị dị na infographic a Ọdịnaya.
Edemede ndị mmadụ a na-ede dịworị ịtụnanya - yabụ anyị lekwasịrị anya n'akụkụ abụọ maka imeziwanye.
ịzụlite utu aha di egwu na agbanye n'ime mmetụta nke ndị na-agụ ya ma mee ka ha nwee ọchịchọ ịmata ihe iji pịa.
Gbaa mbọ hụ na ndị odeakwụkwọ n’onwe ha wuru ha ịtụkwasị obi na ikike, na-akwalite ọdịnaya ha ma na-ebuli ikike niile maka ika ahụ.
Dị ka m kwuru na mbụ - SEO bụ nsogbu mmadụ, ọ bụghịzi nsogbu mgbakọ na mwepụ. Nnukwu ederede ederede bụ maka ịdọta mmasị ndị na-ege gị ntị. Mgbe ị mere nke ahụ, igwe nyocha ga - agbaso!
Tags: copywritingsearch engine njikarịchaoyiri copyo
Dec 28, 2013 na 2:32 PM
Daalụ maka post na-atọ ụtọ - echere m na ị ziri ezi, Google anaghị atụ ihe dị ka ọ dị na mbụ.
Ọ bụ algorithm dị nkọ karịa ụbọchị ndị a - ọ na-ahọrọ ihe dị n'ime ihe dị mma.
Echere m na SEO ga-anọgide na-adị mkpa (maka azụmaahịa) ruo mgbe ndị isi kọmputa Google nwere AI n'ezie ma nwee ike iche - mgbe ahụ anyị anaghị arụ ọrụ!
Google+ na-aghọkwa ihe dị mkpa - onye edemede niile.
Ndụmọdụ niile ị kesara bụ ihe ịtụnanya ma na-arụ ọrụ. M nwere echiche banyere ya dị ka m eke ahụ ike copywriter-Michael Jones ike SEO mbipụta ya. Iringkpọ onye edemede gị bụ mkpebi dị mma, ebe ọ bụ na m na-enweta ọrụ ndeputa na ahịa dị n'okpuru otu ụlọ. Gwọ ndị ezi uche dị na ha ma nwee ọtụtụ ahụmahụ.